Semalt dia manome soso-kevitra maimaim-poana maimaim-poana amin'ny tranonkalan'ny Internet
Ny serivisy tranonkala sasany dia malaza eo amin'ny mpiserasera noho ny fitrandrahana mampiavaka azy safidy, endri-javatra, ary fananana, raha toa ka tsy misy dikany ny tolotra hafa. Ny serivisiana tranonkala resahina eto dia tsy tena sarotra, ary afaka manasitrana marobe sy tranokala maro. Marina fa misy fandaharam-panaovana maro be, saingy ireto manaraka ireto dia maimaim-poana ary hanatanteraka ny fepetra takian'ny raharaham-barotra.
Import.io dia tamba-jotra mahery vaika momba ny angon-drakitra izay manaraka ireo fomba tsotra entina hamokarana angona. Izany dia afaka manangana ireo tahirin-tenanao manokana ary manondrana ny angon-drakitra avy amin'ny tranonkala iray amin'ny iray hafa. Plus, azonao atao ny mamonjy ny angon-drakitra tianao ao amin'ny rakitra sarotra, ary ny Import.io dia tsy mila fehezan-dalàna hanaparitaka pejy maro.
2. Kitapo Scrape
Ny Kitapo Scrape dia natokana ho an'ny serivisy SEO ary manome orinasa sy freelancers miaraka amin'ny tolotra maimaim-poana maimaim-poana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia azontsika atao ny milaza fa fitaovana SEO sy tondro zotra iray izany. Ankoatr'izay, ny Scrape Box dia afaka manatanteraka asa mifandraika amin'ny fitadiavana moter crawling, fanehoan-kevitra famoahana, fanamarihana rohy, fikarohana teny sy teny SEO.
CloudScrape dia tranonkala mpanamboatra tranonkala sy mpanonta an-tserasera izay manampy amin'ny fanivanana antontam-baovao marobe tsy misy olana. Manome antsika ny fitaovana hamahanana ireo angona amin'ny sehatra fitahirizana rahona samihafa toy ny Box.net sy Google Drive..Azonao atao ihany koa ny mitazona ny angon-drakitrao amin'ny endrika CSV sy JSON. Izy io dia iray amin'ireo sampan-draharaham-bary mafonja sy mahery vaika indrindra ao amin'ny aterineto izay manampy amin'ny fikarohana amin'ny alalan'ny tranonkala, mameno ny endrika, mamorona robots ary manala ny angon-drakitra amin'ny fotoana voafetra.
TheWebminer dia fandaharana malaza amin'ny angon-drakitra an-tserasera ary manompo ho toy ny automation mahery vaika sy ny serivisy. Avy amin'ny angon-drakitra amin'ny fotoana iray mankany amin'ny tranonkala tokana, ity fitaovana ity dia manome fampahalalana marina amin'ny andavanandro amin'ny endrika isan-karazany. Izy io dia manadio ny angon-drakitra amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo dika mitovy sy ny votoaty tsy ilaina, manome anao ny vokatra tsara indrindra.
Mozenda dia tranonkala tena manaparitaka ary manaparitaka ny fitaovana fampiasana angon-drakitra. Ny ankamaroany dia manaiky ny marika samihafa ary tonga amin'ny haitao haitao haingana, manolotra haingana ny famolavolana, ny fampitomboana tsara kokoa ary ny fahazoana mora amin'ny karazana data maro. Afaka mandamina ny rakitrao ianao ary manondrana azy ireo amin'ny endrika samihafa mampiasa Mozenda. Ity programa ity dia fantatra amin'ny fahamendrehany ary tsy mitaky fikojakojana.
6. Visual Web Ripper
Ny Visual Web Ripper no vahaolana tokana ho an'ny rindrambaiko an'ny automated , votoaty fanangonana, ary fanangonana tranonkala. Io no iray amin'ireo mpamatsy angon-drakitra mahery vaika indrindra amin'ny aterineto. Ny fitaovana dia manangona angona amin'ny endrika endrika sy sary. Izany dia mametraka ny angon-drakitra mifototra amin'ny fepetra takinao ary ny vokatra dia sarobidy sy ilaina foana.
WebHose, antsoina koa hoe Webhose.io, dia tranonkala mahaliana sy fandraketana an-tserasera izay manome fahafahana miditra mora foana ny angon-drakitra sy ny rafitra azo antoka. Azonao atao ny mikaroka tranonkala an'arivony sy loharano an-tserasera ary mamonjy ireo zavatra farany amin'ny fiteny 200 mahery. Manampy anao handrakotra ireo sehatra fiadian-kevitra isan-karazany, fampahalalam-baovao, bilaogy, ary mpivarotra an-tserasera Source .